Icandelo lokumakisha-I-OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Ukumakisha isahlulo yindlela eyonga iindleko yokongeza iilogo okanye iileta zesiko kuyilo lwakho kwaye kuhlala kusetyenziselwa ukumakisha icandelo lesiko ngexesha lokuveliswa ngokupheleleyo.
● Faka isicelo kwizinto zombane, iisekethi ezihlanganisiweyo (IC), izixhobo zombane, unxibelelwano ngeselula, iimveliso zehardware, izixhobo zesixhobo, izixhobo ezichanekileyo, iiglasi kunye neewotshi, ubucwebe, iinxalenye zemoto, amaqhosha eplastiki, izinto zokwakha, imibhobho yePVC, izixhobo zonyango namanye amashishini .
● Izinto ezisetyenziswayo zibandakanya: isinyithi esiqhelekileyo kunye nealloys (isinyithi, ubhedu, i-aluminium, imagniziyam, izinc kunye nezinye izinyithi), isinyithi esinqabileyo kunye nealloys (igolide, isilivere, titanium), ii-oxides zentsimbi (zonke iintlobo zee-oxides zesinyithi zamkelekile), umphezulu okhethekileyo unyango (i-phosphating, i-aluminium anodization, i-electroplating surface), izinto ze-ABS (izindlu zombane zombane, iimfuno zemihla ngemihla), inki (izitshixo ezibonakalayo, iimveliso eziprintiweyo), i-epoxy resin (i-electronic component yokupakisha, i-insulation layer).
Product ukumakisha kuquka laser lokumakisha nokukrola cnc.
● Ukumakishwa kwe-Laser yindlela yokumakisha esebenzisa i-laser ene-eneji ephezulu yokuhambisa umbane kwindawo yokusebenza okanye umphunga wombane okanye ukuvelisa ukutshintsha kwemichiza ngokutshintsha umbala, ngaloo ndlela kushiya uphawu olusisigxina.
● Umgaqo osisiseko wokumakisha i-laser kukuba i-laser ene-laser ene-high-energy iveliswa ngumvelisi we-laser, kwaye i-laser egxile kwizinto zokuprinta ukunyibilika kwangoko okanye ukuphelisa umphezulu. Ngokulawula indlela yelaser ebusweni bezinto, yenza amanqaku afunekayo.
● Ukumakishwa kweLaser kubonakala ngokungaqhagamshelwa, okunokuphawulwa kuwo nawuphi na umphezulu okhethekileyo, kwaye umsebenzi awuyi kukhubazeka kwaye uvelise uxinzelelo lwangaphakathi. Kukulungele ukumakisha isinyithi, iplastiki, iglasi, iseramikhi, ukhuni, ulusu kunye nezinye izinto.
● I-Laser inokumakisha phantse onke amalungu (afana neepiston, iiringi zepiston, iivalves, izitulo zevalve, izixhobo zehardware, izixhobo zangasese, izinto ze-elektroniki, njl.njl.), Kwaye amanqaku ayinxibanga, inkqubo yokuvelisa kulula ukuyisebenzisa, kwaye iindawo eziphawuliweyo zinokumila okuncinci.
● Kufanelekile ukusika, ukukrola ngakwimacala amabini kunye nokukrola oku-ntathu kwizixhobo ezahlukeneyo ezithe tyaba. Ukongeza, eyona misebenzi iphambili kunye nezibonelelo zomatshini wokukrola i-plaque yensimbi: onamandla, owenzelwe izinto ezininzi, nokuba kukwenza ubhedu, intsimbi engatyiwa, i-titanium, i-aluminiyamu kunye nokunye ukubhala i-metal surface, iipateni zokukrola kunye ne-art graphic crafting njl. Yenze. Ngenxa yomsebenzi wokukrola onamandla kunye nesingxobo salo matshini, into yokwenza umsebenzi ingaqwalaselwa ukusuka kwiifomathi ezinkulu zefomathi kwizigcina-zifuba ezincinci kunye neepleyiti zamagama.
● Ukukrola i-CNC kukudibanisa kunye nokugaya ngokwemigaqo yokusebenza. Ukhetho oluchanekileyo lwezinto zokukrola ze-CNC kunye nokusetyenziswa ngokufanelekileyo kwetekhnoloji kunokuba yiprojekthi enembuyekezo ephezulu kutyalo-mali. Kuba izinto zokukrola ze-CNC zibonakaliswa ziipatheni ezinzima, iimilo ezikhethekileyo, kunye neemveliso ezigqityiweyo, ngelixa oomatshini bokukrola be-CNC ikakhulu bezizinto ezinobunzima, oku kuyayilinganisela imo yokusebenza ye-CNC yokukrola njenge: "Ukugaya okukhawulezayo ngezixhobo ezincinci". Ngapha koko, oku ikwayiyo "inzuzo yobungcali" ye-CNC yokukrola, kwaye isizathu kukuba i-CNC yokukrola yenza "ishishini elingenakuqhubekiswa ngezixhobo ezinkulu eziqhelekileyo". Ngenxa iingenelo ezizodwa zobungcali, nokukrola i-CNC, ukukrola kwe-GNC kuluncedo ngakumbi kwezi mveliso zilandelayo: ishishini lokukrola isikhunta kunye nomzi mveliso wentengiso.